I-DDoS ihlasela nokuvikelwa kwama-botnets ngezindleko ze-Semalt
Ngokwemiyalo yabaphathi be-botmasters, ama-botnets athwala inombolo enkulu yamakhompyutha ukwenza imisebenzi engekho emthethweni. Amandla anjalo anika abahlaseli be-intanethi ukwenza ubugebengu obuhlukile ku-inthanethi. Ngokuvamile, lezi zigebengu azitholakali futhi zingalimaza idumela lenhlangano yakho ngesikhathi. Ngokwesibonelo, ngo-2016, i-botnet ethize yasetshenziselwa ukudala ukuhlaselwa kwe-DDoS, ethinta amawebhusayithi amaningi e-social media njenge-Twitter. Uma uthola ama-imeyili amaningi nsuku zonke, amathuba ukuthi ikheli lakho le-imeyili liyaziwa nge-spammers. U-Igor Gamanenko, i-8 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, uthi ngenhlanhla, sinamakhono amaningi okuhlunga ugaxekile, okuyiningi lawo alisiza ukuvimbela ukufika kwemilayezo engekho emthethweni neyesolisayo.
Asikwazi ukungazinaki iqiniso lokuthi cishe akunakwenzeka ukuqeda ama-botnets nama-imeyili ogaxekile. I-FBI iphenye i-subcommittee ye-Senate yase-US ngenhloso yokukhomba amakhompyutha anesifo. Ngenxa yalokho, uphenyo lwabonisa ukuthi abaduni bangakwazi ukulawula amakhompiyutha amancane uma befuna. Naphezu kokukhulu kwalolu daba, abasebenzisi abasebenzisa ikhompuyutha abavame ukungazi lutho ngamabhodnetshi..I-Botnets ibutho lamadivayisi wekhompiyutha namaselula atheleleke nge-malware futhi anciphise ukwenza ubugebengu obuku-intanethi, ngaphandle kolwazi lomsebenzisi. Abahlaseli, ekuhambeni kwabo, bangalawula ama-botnets ekude futhi babuze ukuba babambe ulwazi olubucayi, basakaze i-malware, bathumele ama-imeyili ogaxekile, futhi baqalise ukuhlaselwa kwe-DDoS.
Ukuthumela ugaxekile nokusabalalisa amagciwane kanye ne-malware
Okokuqala, kufanele wazi konke mayelana nogaxekile. Yenzelwe ukukuthumela ama-imeyili angenangqondo futhi ecasulayo. Amanye amakhompiyutha akhonjiwe anikezwe umsebenzi wokuthumela imilayezo yogaxekile enombolweni enkulu yamakheli e-imeyli. Inhloso yale imeyili yama-spam isakaza amagciwane futhi isakaza i-malware kwi-intanethi. Ungase ube yisisulu se-imeyili njengemikhiqizo abayinikezayo kubonakala sengathi iphezulu yekhwalithi ephezulu, kodwa imikhankaso enjalo inenzuzo kuphela kubaduni, futhi awukwazi ukuthola izinzuzo ezivela kubo. Ngokwesibonelo, uma uthola ama-imeyili avela kumsebenzisi waseNigeria athi unqobile amaRandi ayizigidi ezingu-140, ungase uthande ukubamba iqhaza noma uxhumane naye. Lezi imilayezo yobugebengu obuyiphambeko obuzama ukukhohlisa abasebenzisi futhi bathambekele ukweba abasebenzisi bakho namaphasiwedi.
Gcina engqondweni, akufanele uphendule kwimilayezo yogaxekile. Ngaphezu kwalokho, akufanele uchofoze okunamathiselwe kwe-imeyili ongaqiniseki ngakho. Inkinga ye-imeyli yogaxekile ibe yombono wezinkathi ngesikhatsi, futhi amabhuthoni amaningi asebenzayo ngenxa yalo. Inqwaba yebhobhu ithunyelwa ezentengiselwano zezohwebo kanye nezinhlangano ezinkulu zokuzuza kwezezimali. Ama-Botnets asanda kubamba izinkampani ezifana ne-Evernote ne-Feedly, futhi abacebi bazama ukukhipha imali ngokusebenzisa izinsongo zokuhlaselwa kwenkonzo.
Ingabe sidinga ukuvikelwa kwe-botnet?
Ikhompuyutha ethintekile yi-bots iphinde ilawulwe yi-hacker futhi ayikwazi ukulawulwa ngumnikazi wangempela. Izokwenza ngokuthula ngomshoshaphansi we-cyber-crime futhi ingenza inombolo enkulu yemisebenzi engekho emthethweni. Ngamanye amazwi, uma ikhompyutha yakho isulelekile, ngeke isebenze kahle, okwenza i-intanethi ibe yindawo engaphephile futhi engathandeki kuwo wonke umuntu.